Fanakolahana masoandro: ny zoma faha-13 - manaitra ny daty ve? | TeraNews.net
Fanakolahana masoandro: ny zoma faha-13 - manaitra ny daty ve?
mpanoratra Artem Navoaka tamin'ny 12.07.2018
Zoma 13 jolay 2018 ho marika hetsika hafa. Fizarana solar. Ho an'ny olona marobe, ny daty sy ny hetsika iray dia hita fa tsy hita maso. Farafaharatsiny ao amin'ny haino aman-jery sosialy, 13 jolay no miady hevitra.
Tsy misy resaka ny momba ny fiafarana izao tontolo izao, ary tsy misy olona miandry ny iraky ny apokalipsy. Inona no mampifaly. Na izany aza, ireo mpanandro, izay miezaka manampy ny mponina ao amin'ny planeta, dia manome soso-kevitra, amin'ity andro ity, hanalavitra ny dia lavitra sy handany fotoana amin'ny tombontsoa ho an'ny tenany sy ny fianakaviany.
Famakiana ny masoandro: zoma faha-13
Raha ny momba ny eclipse dia tsy ny rehetra no hahita ny hetsika. Azo heverina ny fanamarihana ny fiposahan'ny Sun Moon amin'ny morontsiraka atsimon'i Aostralia, avy amin'ny nosy Tasmania ary avy any amin'ny faritra Antarctica. Ny teboka tsara indrindra dia jerena dia Hobart ao Tasmania. Amin'ny fotoana 13-24 ao an-toerana, hanararaotra ny 35% ny fanalela ny volana.
Ny ankamaroan'ny olona dia hahita hetsika fotsiny amin'ny sary azo antoka fa hiseho amin'ny tamba-jotra.
Ny manampahaizana ao amin'ny NASA dia manamarika fa ny famerenana matetika ny tako-masoandro isan'andro dia zara raha mitranga amin'ny daty manan-danja izany. Ny fotoana farany teo, tamin'ny zoma faha-13, dia nisy tsikombakomba tamin'ny volana Desambra 1974. Ny takoona amin'ny ampahany manaraka, nidina tamin'ny zoma faha-13, dia ho hitan'ny mponin'ny tany afa-tsy 2080 ihany.
Horonantsary izaho angano - firy taona no nitrangan'ilay hetsika
Teleskaopy astronomia F30070M misy tripod
Xiaomi Mijia Sonic Electric borosy nify T100
Jiro maranitra Difeisi - tonga ny ho avy
T2 Tuner misy port LAN ho an'ny fahitalavitra
Fitsipika momba ny hazakazaka amin'ny birao
Xiaomi mpanasa miaraka amin'ny fanamainana
Air Mouse Wechip W2 ho an'ny fahitalavitra Android